17-Feb-2020 Motivational Article
Comfort Zone က ဘယ်လို ထွက်ကြမလဲ ??? ▪️ ဘဝကြီးက နေထိုင်လှုပ်ရှားရတာ အရမ်းလွယ်ကူနေတဲ့အခါ Comfort Zone ထဲ ရောက်နေမိပြီလား ရုန်းထွက်ဖို့လိုနေပြီလား လို့ စဉ်းစားမိဖူးကြလား? အများစုကတော့ NO လို့သာ ဖြေကြမှာပါ။ ▪️ ဘာလို့ဆို ကျွန်တော်တို့ အများစု က Comfort Zone ကို မရောက်ရောက်အောင် သွားချင်ကြသူ။ ရောက်နေမှန်းသိရက်ကို နေချင်ကြသူ က များသားကိုဗျ။ ▪️ တကယ်တမ်းကျ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စာကျက်နေရတာ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတာ တွေမှာ အလွယ်တကူ သက်တောင့်သက်သာ ပြုလုပ်နေရတာမျိုးနဲ့ Comfort Zone ထဲ ရောက်နေတာမျိုးက မတူညီပါဘူး။ ဥပမာ - ကိုယ်က Productive ဖြစ်သူမို့ တစ်နေ့ကို အလုပ်တာဝန် ၁၀ ခု လောက် အေးဆေးလုပ်နိုင်တာမျိုးနဲ့ လေး ငါး ခုလောက်သာ လုပ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ နေနေတာမျိုး ကွဲပြားသလိုပေါ့။ ▪️ဆိုတော့ ဘာလို့ Comfort Zone မှာ မနေသင့်တာလဲ?
17-Feb-2020 Personal Development
17-Feb-2020 Business & Management Skills
17-Feb-2020 Career/Workspace Related